Adeeg | Soo-saaraha Qalabka Qolka Jiifka ee Handuan
Soo-saaraha Xirfadleyda Qalabka Qolka Jiifka ah ee Shiinaha
Guri > Adeeg
Shirkaddu waxay soo bandhigeysaa qalabka khadka wax soo saarka horumarsan sida noocyada caanka ah ee gudaha si loo sameeyo xaalad lagu dhasho dammaanad qaadka tayada wax soo saarka. Shirkaddu waxay leedahay xirfadle xirfad leh R
& Kooxda D ee baaritaanka wax soo saarka iyo horumarinta, iyo koox suuq geyn xirfadeed leh iyo habka suuq geynta suuqgeynta. U deji cilmi baaris iyo horumarin, wax soo saar iyo iibin mid.
Handuan ee No.19, Wadada Kangtai South, block B, Shatou Industrial Park, Magaalada Jiujiang, Degmada Nanhai, Foshan City waxsoosaarka Main. Shayga wuxuu u hoggaansan yahay qeexidda tayada tayada adag. Qalabka horumarinta horumarsan wuxuu dammaanad qaadaa soo saarista a. Badeecada ayaa baahi weyn loo qabaa gudaha iyo dibedda iyadoo looga mahadcelinayo faa'iidooyinkeeda dhaqaale ee aadka u badan.
Handuan ee No.19, Wadada Kangtai South, xanibaada B, Shatou Industrial Park, Magaalada Jiujiang, Degmada Nanhai, Foshan City Production Main wax soo saarka. Alwaaxda ceeriin ee Handuan waxaa laga keenay alaabada la isku halleyn karo. Kahor wax soo saarka, alwaaxa ayaa la tijaabiyaa si uu u gaaro Shahaadada Calaamadaha Deegaanka ee Shiinaha. Waxsoosaarka ayaa muhiim u ah warshado badan. Waxay door muhiim ah ka ciyaaraysaa kordhinta wax soo saarka iyo goynta kharashaadka shaqaalaha ee soosaarayaasha. Handuan waxaa loogu talagalay sawir gacmeed. Qaab dhismeedkeeda, qaabkeeda, cabirkiisa, mabaadi'da hawlgalka, iyo shuruudaha kale ee wax soo saar ayaa lagu gaari karaa dhammaan farsamaynta saxda ah ee sareysa.
Wax intaa ka badan ma jiraan~~